गोलाप्रथाबाट आज ५९ राष्ट्रिय सभा सदस्यको भाग्य परीक्षा ! – www.agnijwala.com
गोलाप्रथाबाट आज ५९ राष्ट्रिय सभा सदस्यको भाग्य परीक्षा !
काठमाडौँ, ४ असार ।आज राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि निर्धारण गर्न सोमबार गोलाप्रथा गरिँदै छ। पहिलोपटक विभिन्न क्लस्टरका आधारमा छानिएका ५९ जना राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको कार्यकाललाई २, ४ र ६ वर्षमा विभाजन गर्न सोमबार गोलाप्रथा विधि प्रयोग गर्न लागिएको हो।
संविधानको धारा ८६ ९३० मा राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुने उल्लेख छ। साथै, यसरी पदावधि निर्धारण गर्दा गोलाप्रथाबाट गरिने उल्लेख छ।
राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा गोलाप्रथाबारे व्यवस्था गरिएपछि सोमबार गोलाप्रथा हुन लागेको हो। गोलाप्रथाबाट पहिलो १९ जनाको कार्यकाल २ वर्षको, २० जनाको ४ वर्षको र बाँकी २० जनाको ६ वर्षका लागि तय हुनेछ। यसरी रिक्त हुने स्थानमा निर्वाचनबाट सदस्यहरू चयन हुनेछन्। यद्यपि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्यको हकमा छुट्टै गोलाप्रथा हुनेछ।
गोलाप्रथाबाट राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको कार्यकाल समेत तय हुनेछ। गोलाप्रथाबाट उनीहरुको पदावधि दुई वा चार वर्षे कायम भएमा हाल रहिरहेको पदमा रहन पुनस् सदस्य निर्वाचित हुनुपर्नेछ।